Qodobadii ka Soo Baxay Shirkii Golaha Wasiirada Somaliland oo Maanta Dhamaaday | Saraar Media Business
Qodobadii ka Soo Baxay Shirkii Golaha Wasiirada Somaliland oo Maanta Dhamaaday
Posted by admin on October 9, 2012 in News, Somaliland, Wararka Afsoomaliga · 0 Comments
Hargeysa, Talaado, 09 October , 2012 (SM) Waxa caawa qasriga Madaxtooyadda lagu soo gabogabeeyay shirkii saddexdii maalmood ee u dambeeyay xukuumadda uga socday halkaasi, waxaana laga soo saaray qodobo dhowr ah.
War-saxaafadeed lagu soo ururiyey qodobadii shirkaasi ka soo baxay isla-markaana uu ku saxeexan yahay Afhayeenka Madaxtooyadda ayaa u dhignaa sidan “Sida aad la socotaan waxaa caawa ku soo gebageboobay qasriga Madaxtooyada shirkii qiimaynta wax-qabadka iyo qorshaha mustaqbalka, shirkaas oo socday muddo sadex maalmood ah, oo uu gudoominayay Madaxweynaha JSL Axmed Maxamed Silanyo. Waxaa ka soo baxay war-murtiyeedkan:
2. Shirku wuxuu isla qaatay in la fuliyey balan-qaadyadii Bulshada loogu balanqaaday shanta sano 70%.
3. Shirku wuxuu isla qaatay in wax laga qabto 130 qodob, kuwaas oo saldhig u noqon doonna Siyaasadda sanadka cusub ee 2013.
4. Shirku wuxuu isla qaatay adkaynta nabadgelyadda, la dagaalka argagixisada/budhcad-badeeda iyadoo kor loo qaadayo tayada Hay’addaha amaanka, lana xoojiyo xidhiidhka dhexdooda.
8. Shirku wuxuu isla qaatay in qarankani baahi weyn u qabo sidii loo heli-lahaa cunto ku filan, iyadoo taa laga duulayana in sanadka cusub xoogga la saaro wax-soo-saarka (Sida, Beeraha, Kalluumaysiga iyo Xoolaha), iyadoo la samayn doono barnaamij u gaar ah, oo tusmo iyo tixgelin ku leh Miisaaniyadda Qaranka ee 2013.
9. Shirku wuxuu isla qaatay in la dejiyo siyaasadii guud ee dhulka lana illaaliyo degaanka.
10. Shirku wuxuu isla qaatay in bartilmaameedka 1aad yahay aqoonsi buuxa oo Somaliland ka hesho dunida, in la sameeyo dib-u-habayn iyo diyaarinta siyaasad qorshaysan, xidhiidh fur-furan iyo iskaashi fiican oo ku wajahan dhinacyada kala duwan ee Beesha Caalamka, sida Africa, Dunidda Carabta, Yurub, America, Urur Goboleedka IGAD, AU iyo jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa. Sidoo kale in la xoojiyo doorka qurba-jooga Somaliland ka qaadan karo ictiraafka.
11. Shirku wuxuu isla qaatay in sanadkan Siyaasadda miisaaniyadda 2013 ku salaysnaato, xoogana la saaro nabadgelyada, horumarinta Cadaaladda, xoojinta Siyaasadda arrimaha dibedda, Horumarinta Gobollada bariga (Sool, Sanaag bari iyo Buuhuudle), kor u qaadida shaqo abuurka iyo wax-soo-saarka.
12. Shirku wuxuu isla qaatay ahmiyada ay doorashooyinka xorta iyo xalaasha ahi u leeyihiin qaran, sidaa darted xukuumada waxaa ka go’an in doorashooyinka Dawladaha Hoose ugu qabsoomaan si nabadgelyo ah xiligii loo cayimay.”
Ahmed Saleeban Dhuxul
Shirkii Ansixinta Dastuurka Somalia oo Maanta Hakaday iyo Qarax ka Dhacay Muqdisho
Shirkii Beesha Habar Yoonis oo Dhamaaday iyo Go’aamadii ka Soo Baxay
Wasiirka Khaarejiga Somaliland oo ka hadlay Qodobbadii kasoo baxay shirkii Istanbul
wasiirka wasaaradda Ganacsiga Somaliland oo Maanta horyimi Gudiga Joogtada ah Ee Golaha Guurtida
Shirkadda Dahab-shiil oo deeqdii ugu ballaarneyd gaadhsiisay dadkii ka barakacay fatahaaddii Magalada Baladweyne
Gudidia Diwaan Galinta & Ururada Siyaasada oo kala Saxeexday Anshaxa Doorashada